Madaxda Dowlada ugu sareysa ooaan ka hadlin xasuuqa 8 Dhaliyaro | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Madaxda Dowlada ugu sareysa ooaan ka hadlin xasuuqa 8 Dhaliyaro
Madaxda Dowlada ugu sareysa ooaan ka hadlin xasuuqa 8 Dhaliyaro
Madaxda ugu sareyo dowlada somaliyeed oo ilaa iyo haatan ka aamusan kana hadalin kana tacsiyadeyn kana dhii dhin dhacdadii fosha xumeyd oo labadii maalin ee lasoo dhaafay ka dhacday deganka gololey waa somali naceyb ay qabaan hoganka sarre ee dowlada haatan talada heysa.
Waxaa gebi ahaan latoogtay sideed ruux oo hal beel ah oo wada dega deganka gololey hasa yee shee waa maxaay sabata ay ilaa iyo haatan uga aamusan yihiin madaxdii qaranka.?
Somaliyey waxaa cad oo xaqiiq ah in xasuuqa umada somaliyed iyo shacabka masaakiinta ah ay dowladu ku faraxsan tahay waxaasa biyo kama dhibcan ah hadii aad sidan ku amustaan in maalinba kis la idin qaarijin doono taasoo ay samaynayaan dadka idinka haatan hogaanka idiin ah.
Waxaa hubaal ah inaan ku noolnahay dal ay hogaan ka yihiin dad aargoosi ujoogo oo jecel gumaadka,gardarada iyo gobida shacabka somaliyeed hadii aadan kadhiidhina waxaad mari doontaan wadadii ay shalay walaalihiin mareen.
Ugu dambeyn waxaan sidoo kali cambaa reynaa xildhibaanadii u dhaartay bad baadin tooda oo kuwa metala dowlada dhexe oo ah laba xil dhibaan aqalka sare iyo aqalka hoose iyo sidoo kali laba xil dhibaan gobal oo iyana kumetal deganka hir shabelee.
Waa cawaaqib xumo iyo ciil markii lagaadilo ruux cadkaadaa oo aan cidna wax ugeysan waxasa maalin uun la weydin doonaa madaxda haatan jirta oo umuuqda kuwo iyagu ka dambeya maadaama aanu weli kahadlin.
Siyasi curdun ah: Mustaf Muxudiin Maxamuudmadax
Previous articleBanaanbaxyo rabshado wata oo maalintii 3aad ka socda magaalada Minneapolis gobolka Minesota ee dalka Mareykanka
Next articleAlshabaab oo weerar ka fulisay deegaan ku yaala Gudaha Daka Kenya
Ciidamo faraban oo itoobiyaan ah oo ka yimi dhanka gobolka Gedo...
Soomali si arxan daraa loogu dilay Dalka Koonfur Afrika